ngokuba ngamaKristu, umbuzo ayikho nokuba siza kujongana nesilingo, kodwa njani Siya kusabela xa sisenza. kuLuka 4:1-2, sifunda malunga weyelinga uYesu yena wasabela njani. Nantsi le evakalayo kwi intshumayelo emfutshane ndashumayela ngaloo sicatshulwa ecaweni yam iinyanga ezimbalwa emva. Ndandifuna ukujonga ekuhendweni kaYesu, kubonisa ekuthobeleni yakhe, kwaye ucinge ukuba singafunda ntoni kule ndawo. Zeziphi izinto sifanele sikhumbule ngamaxesha isilingo? Nazi iingongoma eziphambili:
mna. UThixo Ikuvumela kwaye Usebenzisa Izilingo njengenxenye yesicwangciso sakhe
II. Ubuthathaka akekho njengesizathu uyekelela esilingweni
Ukuhendwa uYesu BragOnMyLord
Ndithandaza ukuba lukhuthazo kuwe
N-Tahir • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 8:13 mna • impendulo
James 1:13, “Makungabikho namnye utshoyo akuhendwa, “Mna ehendwa nguThixo”; kuba uThixo akanakuhendeka kokubi, ke yena akalingi mntu.”
Ebube_nwadiei • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 8:13 mna • impendulo
Yiloo nto kanye into kwaza kusa apha kuthi. UThixo akasebenzisi isilingo, kodwa yena uya kusihlangula kuyo ukuba sithi sicele.
engaziwa • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 8:14 mna • impendulo
BPro_12 • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 8:15 mna • impendulo
@ N-tahir @Ebube_nwadiei Nceda ukuphulaphula yonke intshumayelo kwakhona. Trip asitsho ukuba uThixo akalingi thina. Yena ke uthi nje ukuba yanguThixo omqubisanise. YanguThixo omqubisanise ukuze sizingise ngalo ngokuthi nokuthembela kuye. Ukuba sikhetha ukuba walala phantsi kwesimo sethu phambi koThixo kwaye anikezele intando yakhe, ngenxa iya kuba ubudlelwane ngcono naye, nto leyo ekugqibeleni into ayifunayo kuthi. Yini na ukuba athumele eyona nto ibalulekileyo kuye, UNyana wakhe kanye, ukuba afele emnqamlezweni into akazange akwenze?
Nathaniel Babalola • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 8:15 mna • impendulo
kanye. Kodwa uThixo test ke thina, nje wenzayo Abraham. UAbraham n't elinga kodwa wavavanywayo